Fitsinjaram-pahefana “Ilay maha olona no sakana”
Fitaovana politika sy fitaovana entina manao fampielezan-kevitra ny fitsinjaram-pahefana na dia voafaritra ao anaty lalàmpanorenana satria ny antsika Malagasy dia mifanohitra amin’ny zava-misy any ivelany.
Efa nahaleo-tena ilay vahoaka any ifotony ary niezaka mametraka io fitsinjarana io ka nezahana nampidirina anaty rafitra sisa. Nanamafy izany ny filohan`ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao, fa lasa fitaovana politika mihitsy. Efa ela no niresahana an`io tamin`ny taona 1990-1991 kanefa isika izao 2019. Ny fitsinjaram-pahefana no tena tadiavan`ny mpiray tanindrazana amin`izao saingy ilay maha olona no sakana. Ny olombelona dia manana fomba fisainana hoe tazomiko irery ny fahefana ka sarotra, hoy izy. Na dia efa voasoratra ao anaty lalàmpanorenana aza dia tsy vitantsika ny fametrahana izay araka ny tokony ho izy. Ohatra eo amin`ny lafiny ara-bola, dia mila fanampiana ny fahaiza-manao ny fitantanana ny olona eny ifotony. Nohamafisiny fa izany no tokony himatimatesana. Mila fandrindran ilay izy hahafahana mampandroso ny firenena ao anaty filaminana sy fitoviana. Marihina fa ireo vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana any ivelany dia efa niaina an’ilay fitsinjaram-pahefana toy ny any Alemaina ary ny finoanany dia ny fahaizana mitantana izany tsy ho politika fotsiny ary mampandroso firenena iray. Nisy moa omaly ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nataon’ny masoivohon’i Alemaina Atoa Michael Derus ny filohan`ny Antenimierandoholona ka nisy ny fifampizarana traikefa teo amin`ny roa tonta.